नेपाल आज | कसरी जोगिने पित्तथैलीको पत्थरीबाट? जान्नुहोस् उपाय
कसरी जोगिने पित्तथैलीको पत्थरीबाट? जान्नुहोस् उपाय
बिहिबार, ०५ असार २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज(PO)
काठमाडौं । पित्तथैलीमा देखिने पत्थरी अहिले धेरै मानिसहरूलाई सताइरहेको एक जटिल रोग हो । यो रोग हरेक उमेर समूहमा देखिन्छ । तर, पनि ३० वर्षदेखि ४० वर्षको उमेरमा तुलनात्मक रूपमा धेरै देखिन्छ । यो रोग पुरुषको तुलनामा महिलामा बढी देखिने गरेको छ । यो रोग वंशाणुगत कारणले पनि हुन सक्छ । नेपालमा पनि पित्त थैलीमा पत्थरी हुने विरामीको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको अनुमान गरिएको छ । पित्तथैलीको पत्थरी कुनै रोग विशेषको कारणले नभएपनि यस विषयमा भएका अध्ययनहरूले यसका विविध कारणहरू देखाएको छ ।
विविध कारणमध्ये मोटोपना, मधुमेह, धैरै तौल घट्नु, निरन्तर व्रत बस्नु, रक्तअल्पता, गर्भनिरोधक चक्कीको बढी सेवन आदि हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । सामान्यतः पित्तथैलीको पत्थरीका विरामीमा कुनै लक्षण देखिँदैन । अरू कुनै कारणले पेटको भिडियो एक्सरेगर्दा पित्तथैलीमा पत्थरी देखापर्छ । यसरी पत्थरी भएको फेला पर्नेहरूमध्ये करिब २० प्रतिशत मानिसहरूमा मात्र एकै खालका लक्षणहरू देखिनसक्छन् जसमा अधिकांशलाई पेट दुख्ने हुन्छ ।
धेरै मानिस पित्तथैलीको पत्थरीबारे भ्रममा रहने गरेका छन् । प्रायः पित्तथैलीको पत्थरीको अप्रेसन गरिन्छ र निको पारिन्छ । अप्रेशनमा पित्तथैली नै फालिन्छ । तर, मानिसहरूमा पित्तथैली फालेपछि कमजोर हुने र शरीर क्षीण हुँदै जाने भ्रम पनि छ, यो सत्य होइन । पित्तथैली फाले पनि मानिसको आयु र जीवनमा कुनै असर पार्दैन । यो जानकारी राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो ।